अस्ट्रेलियामा दाजुभाईको रहरलाग्दो नेपाली पसल, धैरेता गर्दा यसरि मिल्यो सफलता ! – Khabar Silo
अस्ट्रेलियामा दाजुभाईको रहरलाग्दो नेपाली पसल, धैरेता गर्दा यसरि मिल्यो सफलता !
अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको बाक्लो बस्ति रहेको छ। बिशेस नेपालीहरु नेपालमा पाइने परिकारहरु र ग्रोसरी आइटम धेरै नै मिस गरि रहेको देखिन्छ। तर, बास्तबिकता भने अलि भिन्न देखिएको छ। अस्ट्रेलियाको बिभिन्न ठाउहरुमा नेपालीहरुको पसल देख्न सकिन्छ भने भारतीय र अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरु द्वारा खोलिएको पसलमा पनि नेपाली ग्रोसरी आइटम पाउन सकिन्छ। यसै शिलशिलामा दुई दाजु भाई मिलेर एक नेपाली पसल अस्ट्रेलियाको एसफिल्ड मा खोलेका छन। उक्त पसलको नाम नै “दाजु भाई को पसल” रहेको छ।
बिगत लामो समयको अनुभब र सघर्ष स्वोरुप उक्त पसल खोल्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।अस्ट्रेलियामा २००७ मा अध्ययन गर्नु आएका सुरज महर्जनको ६ बर्ष र २०१४ मा डीपेनडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया आएका आशिष श्रेष्ठको ८ बर्ष को ग्रोसरी पसल सम्बन्धि अनुभबले उक्त पसल सजिलै खोल्नु सकिएको जनाएका थिए। बिगतमा साउको काम गरिन्थियो भने अहिले साउ नै भएर काम गर्न पाउदा गर्ब लागेको र गरे के हुन्न धैर्यता हुनु पर्छ ढिलो छिटो सफल भईने मात्र हो भन्ने कुरा जानकारी दिएका थिए।
हामी सग ग्रोसरी पसल सम्बन्धित राम्रो अनुभब भएर हामीले नेपाली समुदायमा केहि गर्नु पर्छ भनेर सम्पूर्ण नेपाली ग्रोसरी आइटम सहज तरिका बाट ग्राहक सम्म पुर्याउने दाजुभाई ले जनाएका थिए। भविष्यमा वाई वाई , जिम्बु साथै नेवारी आइटम सन्या खुना पनि सजिलै नेपालीहरुको माझ पुर्याउने लक्ष रहेको ओएस नेपाल सग को कुराकानीमा जानकारी दिएका थिए। दाजुभाइको पसल एसफिल्ड स्टेसन नजिकै रहेको छ l हाम्रो उदेश्य सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीहरुलाई सुलभ र सजिलै सेवा दिने हो भन्दै विश्व ब्यापी स्वस्थ समस्याले परेको असर त छदै छ, आफु रहे सबै कुरा उपलब्ध गर्न सकिन्छ नि भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरुलाइ सुरक्षित रहन अनुरोध समेत गरेका थिए।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य भइसकेको छ। बजारमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न मूल्यमा मास्क पाइन्छ। सुरूसुरूमा त धेरै ठाउँमा मास्कको अभाव पनि भएको थियो। भारतमा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा मात्र भारतमा झन्डै २५ हजार मानिसमा संक्रमण भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मास्क लगाउँदा संक्रमण रोक्न धेरै सहयोग पुग्ने बताएको छ। […]
टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूसँग घरबेटीले माग्न थाले कोरोना परीक्षण रिपोर्ट